Ku dhawaaqista saamaynta ee Apple Watch | waxaan ka imid mac
Mararka qaarkood wicitaanka adeegga degdegga ah ee wakhtiga saxda ah wuxuu badbaadin karaa nolosheena tanina waa sida saxda ah waxay ku muujinayaan ogeysiiskii ugu dambeeyay ee Apple kaas oo Apple Watch uu yahay jilaa. Noqo muuqaal ama xayaysiis muujinaya wicitaanada dhabta ah ee adeegyada degdega ah ee Maraykanka, wacitaanka dhabta ah ee 911.
Waa run in haysashada Apple Watch ay calaamad u noqon karto daqiiqad muhiim u ah noloshaada sidoo kale waa run in dhammaantood aysan ku dhammaaneynin dhammaadka wanaagsan sida ay muujinayaan kiiskan. Si kastaba ha ahaatee Waxyaabaha muhiimka ah ee kiisaskan ayaa ah xawaaraha aad ku heleyso gargaarka, xasilloonida waxaad ku ilaalin kartaa xaaladda iyo in ka sarreeya dhammaan nasiibka wejiga ka hor dhacdo kasta oo noocan oo kale ah.
Tani waa ogeysiiska Apple kaas oo Apple Watch Series 7 uu yahay jilayaasha si loo samata bixiyo dadka dhibaataysan ka dib markii la waco 911 oo ah lambarka degdega ah ee Maraykanka:
Ku dhawaaqista waxaan ka akhrisan karnaa in saddexdan sheeko nololeed ee ay muujinayaan nasiibka ay leeyihiin Apple Watch wakhtigan ay ku dhammaatay dhammaad farxad leh. "Jason, Jim iyo Amanda ayaa la badbaadiyay daqiiqado ka dib iyadoo ay ugu wacan tahay caawinta Apple Watch" Tani waa suurtagal mahadsanid IPhone-ka ha ku dhawado saacada aad ku samayn karto wicitaanada degdega ah ama si toos ah ulasoco qaabka ku dara e-SIM.
Dabcan, inaad haysato saacad leh kaadhadhkan eSIM-ka ah oo isku dhafan iyo qorshaheeda qandaraasku waxay ku caawin karaan daqiiqad dhib ah, laakiin dhammaan dadka isticmaala ma haystaan ​​saacadahaas waana sababta ay lagama maarmaanka u tahay in iPhone-ka uu u dhow yahay si loo sameeyo wicitaannadan. Markaad la soo hadasho xaalada degdega ah ee SOS, Apple Watch waxay si toos ah u wici doontaa nambarka deg dega ah waxayna la wadaagi doontaa goobtaada adeegyadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Ku dhawaaqida saamaynta Apple Watch